World Archives - Page 4 of 37 - Puntland Mirror Believable Media Website
February 10, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Istanbul-(Puntland Mirror) Labo askari oo katirsan ciidamadda Turkiga ayaa ku geeriyooday kadib markii diyaarad qumaatiga u kacda ay maanta oo Sabti ah ku burburtay gobolka Afrin ee kuyaala waqooyiga galbeed ee Suuriya halkaas oo ay […]
December 7, 2017 Puntland Mirror 0
Washington-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanku uu magaalada Qudus u aqoonsaday caasimada Israel. Trump ayaa ku qeexay tilaabada mid soo daahday six horumar looga sameeyo dadaalada nabada ee Bariga Dhexe. […]
December 4, 2017 Puntland Mirror 0
Sanca-(Puntland Mirror) Wararka ka imaanaya Yemen ayaa sheegaya in la dilay madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalax. Warbaahinta ay maamulaan falaagada Xuutiyiinta oo soo xiganaya saraakiil ayaa sheegay in la dilay Cali. Sawiro iyo muuqaalo wareegaya […]
November 19, 2017 Puntland Mirror 0
Harare-(Puntland Mirror) Xisbiga talada haya Zimbabwe ee Zanu-PF ayaa si weyn isugu raacay in xilka hoggaaminta xisbiga laga qaado Madaxweyne Robert Mugabe, taasoo muujinaysa in uu dhammaaday xukunkiisii mudada badan ahaa. Zanu-PF ayaa madaxweyne ku […]
November 15, 2017 Puntland Mirror 0
Harare-(Puntland Mirror) Milatariga Zimbabwe ayaa xabsi guri dhigay Madaxweyne Robert Mugabe gudaha caasimada Harare, sida uu sheegay Madaxweyne Jacob Zuma ee Koonfur Afrika. Mugabe ayaa khadka taleefoonka ugu sheegay Zuma in uu fiicanyahay, sida uu […]
November 15, 2017 Abdi Omar Bile 0
Harare-(Puntland Mirror) Milatariga Zimbabwe ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen awooda dalka balse waxay sheegeen in Madaxweyne Robert Mugabe oo dalka xukumayay tan iyo 1980, uu nabad qabo. Kadib markii ay la wareegeen taleefishinka […]
September 26, 2017 Puntland Mirror 0
New York-(Puntland Mirror) Waqooyiga Kuuriya ayaa ku eedaysay Mareykanka in uu wado dagaal ka dhan ah iyaga. Wasiirka Arrimaha Dibada Waqooyika Kuuriya Ri Yong-ho ayaa shalay oo Isniin ahayd warbaahinta u sheegay in adduunka oo […]
September 21, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
New York-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shalay oo Arbaco ahayd ku celiyay jeedintiisa ku saabsan Maamul Goboleedka Kurdishka si ay uga noqdaan go’aankooda ah in ay qabtaan afti madax-banaani. “Waxaan rajayn in […]
September 18, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Ankara-(Puntland Mirror) Turkiga ayaa dhoolatus milatari ka bilaabay xadka ay la wadaagaan Ciraaq maanta oo Isniin ah, ciidamada milatariga ayaa bayaan kooban oo ay soo saareen ku sheegay sida ay ku warantay wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu. […]
Marwada Kowaad ee dalka Turkiga oo gargaar gaarsiisay xero qaxooti oo ay ku jiraan Muslimiinta Rohingya
September 7, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Ankara-(Puntland Mirror) Marwada Kowaad ee dalka Turkiga Emine Erdogan ayaa gargaar ku wareejisay qaxootiga Muslimiinta Rohingya kadib safar ay ku tagtay xero qaxooti oo kutaala xadka Myanmar maanta oo Khamiis ah, sida ay ku warantay wakaalada wararka […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Hoggaamiyihii hore Al-Shabaab Mukhtaar Roobow oo loo yaqaan Abuu Mansuur ayaa goaansaday in uu ka tago kooxdiisii hore, waxa uu ku sheegay shir saxaafadeed uu ku qabtay Muqdisho maanta oo Talaado ah. Shir saxaafadeedka [...]